प्रम केपी ओलीले के गरेको ?
काठमाडौं । केपी ओलीजस्ता प्रखर नेताले यसरी बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहका सामु झुक्नु भनेको वीरप्रतिको आदर हो, पुर्षाप्रतिको सम्मान हो, इतिहासप्रतिको गौरव पनि हो ।
फेरि उनी नै प्रधानमन्त्री भएका बेलामा किन सार्वजनिक बिदा दिइएन ।
ओली पूजा गर्छन्, देवदेवी मन्दिर पनि पुग्छन् । उनी किश्चियन माताको होली वाइनप्रति पनि लोभिन्छन् ।
सवाल पुर्षाको हो, राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय एकताको हो । हामी वर्षमा एकै दिन भए पनि पितृ सम्झन्छौं, श्राद्ध गर्छौं, फूल चढाउँछौं, यो भनेको पितृसरापबाट मुक्ति र पितृको आशीर्वाद थाप्ने नेपालीको आफ्नै परम्परा पनि हो ।
केपी ओलीले यो के गरेको ? पितृप्रति नतमस्तक भएको होइन ? हो भने उनले जुन देशमा शासन गरिरहेका छन्, त्यो देशका निर्माता यिनै पृथ्वीनारायण शाह हुन्, जसले नेपाल निर्माण गरिदिए, उनीप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न एकदिनको विदा पनि दिन नसक्ने ? ओलीको यो नतमस्तकता कुन प्रकारको नाटक हो ? कर्मकाण्डीमात्र हुने कि राष्ट्रिय एकता कायम गराउन दिव्योपदेशको पालना पनि गर्ने हो ? ओलीजी बोल्दैनन् ।
१ सय २५ जातिको नेपाल, अनेकतामा एकता कायम भएको नेपाल । ओली प्रधानमन्त्री भएपछि बिखण्डनका स्वर बढेका छन्, सुशासनका बाँधहरु भत्किएका छन्, विदेशी चलखेल बढेका छन् ।
माओ, माक्र्सलेसमेत बडामहाराजका सिद्धान्त अनुकरण गरेको देखिन्छ, राम्रा कुरा लिन र पुर्षाप्रति गौरव गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले यो देशलाई एकता चाहिन्न भन्ने सन्देश किन दिइरहेछन् ?
प्रम ओलीले नेपालीले पाएको स्वतन्त्र, सार्वभौम राष्ट्रको गौरवशाली नागरिकको आत्मसम्मानको श्रेय पृथ्वीनारायण शाहलाई जाने बताए । यही नै सत्य हो, यो कथन ओलीको मनबाट निस्केको अभिव्यक्ति हो भने आफ्नै अभिव्यक्तिको मान राख्न पनि प्रम ओलीले २९७औं पृथ्वी जयन्ति देशव्यापी रुपमा मनाउनु पथ्र्यो । अपहेलना गनेृहरुमाथि कारवाही गर्न सक्नुपथ्र्यो ।
ओलीकै शव्दमा पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियान अत्यन्त समयानुकूल थियो । उनले सुरु नगरेको भए वा सुरु गरिसकेपछि पनि एकीकरण अभियान सफल नभएको भए स्वाधीन, सार्वभौम, आधुनिक राष्ट्रका रुपमा विश्व मानचित्रमा नेपाल उभिनैसक्ने थिएन, राष्ट्र एकीकरणको त्यो महाअभियान सफल नभएको भए त्यसबेला विश्वव्यापी रुपमा छाएको उपनिवेशवादको प्रभावबाट हाम्रो देश जोगिने पनि थिएन । पूर्खाले रगत, पसिना बगाएर निर्माण गरेको स्वतन्त्र, सार्वभौम र अखण्ड नेपालको राष्ट्रिय अक्षुण्यताप्रति हामी सदैव गौरव गर्दछौं ।
प्रधानमन्त्रीले यति भनिसकेपछि उनले राष्ट्रिय एकता दिवसका दिन पृथ्वीनारायण शाहको शालिकमा पुग्नैपथ्र्यो, फूल चढाउनै पथ्र्यो र राष्टिय एकता दिवसका लागि राष्ट्रिय पर्वको घोषणा गर्नैपथ्र्यो । जसले इतिहासप्रति मुखले मात्र गौरव गर्छ र काम अनेकतावादीलाई बल पु¥याउने गर्छ, उसले नयाँ नेपाल बनाउला कि भएको नेपाल बिगार्ला ?